RW Rooble oo is ka fogeeyay la shaqeynta Cabdi Cali Raage | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo is ka fogeeyay la shaqeynta Cabdi Cali Raage
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa qaaday tallaabo kale oo kor u qaadeysa in la aamino shaqada uu hayo, kadib markii, uu ka hor yimid in La taliyaha Farmaajo ka howl galo xaafiiskiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka hor yimid qorshe laga soo maleegay xaafiiiska Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxadamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo la doonayay in Cabdi Cali Raage loo soo wareejiyo xaafiiska RW si uu ugala shaqeeyo arrimaha doorashoyinka.
Cabdi Cali Raage oo ah La taliyaha Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka ayaa hore loogu eedeeyay inuu ka mid ahaa dadkii ka danbeeyay maskaxdii muddo kordhinta, isla-markaana uu gadaal ka taagnaa guddigii doorashada dadban ee dhamaadka sanadkii hore Rooble magacaabay.
Rooble ayaa iska fogeeyay la shaqeynta Raage, sababo la xariira ka dheeraanshaha wax kasta oo abuuri kara shaki, ka hor shirka loo madlan-yahay 20-ka bishan iyo kadibba.
Ra’iisul Wasaare Rooble, oo kalsooni ka heysta Mucaaradka ayaa hore u ballan qaaday inuu ka fogaan doono eex iyo wax is daba marin, waxaana lagula taliyay inuu ka fogaado xaafiska Farmaajo.
Qaban-qaabada Shirka doorashooyinka ee ka furmi doona Teendhada Afisyooni, ayaa ka socota Caasimada, waxaana la filayaa labada maalin ee soo aaddan ay magaalada soo gaaran wufuudda shirka ka qeyb galeysa.